Ikhaya lokuphumula ku-condominium yangasese!
Uzoba nobumfihlo, ukuthula nendawo ethokomele eduze nemvelo! Ezindaweni ezizungezile, imizuzu emi-5 nje ngemoto, kunezimakethe, indawo yokubhaka nezitolo.
Indawo yethu inengqalasizinda ephelele yokusebenzela izivakashi, equkethe abalandeli bakasilingi ne-smart TV, ikhishi elihlomele, i-fiber optic wi-fi - 250 mb - endlini yonke.
Sikwazisa kakhulu ukuphepha, umoya ohlanzekile, nezikhathi zokuphumula. Sifuna ukwabelana nabanye ngalokhu.
Indlu enomoya futhi enethezekile 45 min ukusuka e-BH. (I-TV/Ceiling fan/ikhabethe elincane elinamakhabethe). Isifunda samakhondomu avaliwe 3km ukusuka e-BR040, esifundeni sase-Ipe Amarelo, ukuya ngase-7Lagoas. Isuphamakethe, isitobhi sebhasi nendawo yokudlela phambi kwekhondomu.
Isikhala yethu ine a ingqalasizinda ephelele ukukhonza izivakashi, ne ophahleni fan ne-TV kuwo wonke amagumbi, air conditioning ne obishini e suite, ikhishi sikuhlomele, emoyeni Fryer, nespresso ikhofi machine (amaphilisi ukuletha), Wi-Fi kunethiwekhi 200 mb fibre, indawo yokubhukuda, ishawa, izoso, isiqandisi sotshwala, umshini wokuwasha (sicela ubheke imali yokusebenzisa), phakathi kokunye.
Umpheme ongaphambili, indawo yokubhukuda, umpheme oseceleni kanye nensimu yezithelo kuyaphawuleka, nezitshalo ezivumelana nemvelo yangaphandle, i-pergola ekhangayo nethokomele, ngaphezu kwama-hammocks, amatafula, izihlalo namabhentshi.
- Igumbi lokuhlala lihlanganiswe ngokuphelele nekhishi, elinezindawo ezi-2: indawo yokudlela nokuhlala;
- Ikhishi elinebha yekamelo lokuphumula kumqondo ovulekile;
- Igumbi le-TV elinombhede osofa ababili, i-smart TV eneziteshi ezivaliwe nokusakaza, kanye nefriji yomshini wokuphisa utshwala;
- Igumbi lokugezela eliphelele: ishawa ngamanzi ashisayo, isomisi sezinwele, ishawa ehlanzekile nesibuko esikhulu.
QAPHELA: sihlinzeka ngephepha lasendlini yangasese kanye nensipho ewuketshezi yekhwalithi enhle kakhulu.
- Amakamelo okulala amabili, elinye linombhede ophindwe kabili kanti elinye linombhede ongu-Queen oxhunywe kwi-suite egcwele ne-whirlpool.
- Ilondolo: Umshini wokuwasha, ithangi nocingo lwezingubo, insipho nesithambisi sendwangu - Imali eyengeziwe: 30.00 ngosuku lokusebenzisa.
Indlu inikeza indawo yokuhlala abantu abangu-6 ngokunethezeka, (1 queen bed, 1 double, 1 double sofa bed, kodwa kuyenzeka kuhlalise abantu abayisi-8 abanomatilasi abengeziwe. Lungisa inani labantu endaweni ebesibekiwe ukuze ubone inani elifanele.
Izindawo okwabelwana ngazo ku-condominium:
Izivakashi zethu zingakwazi ukuhamba ngezinyawo kuthrekhi ye-Cooper ye-condominium, zivakashele amachibi angu-2, zivakashele i-Ecological Space, zijabulele nezingane ebaleni lokudlala. Iklabhu ye-Condominium isetshenziswa izakhamizi kuphela.
Mina ngokwami ngiyakwamukela. Sicela wazise isikhathi esilinganisiwe sokufika
- Kunconywa ukusebenzisa imoto ukuze uhlale ngokugcwele.
- Amandla kagesi ezitolo: 110v (ngaphandle kwamashawa ezindlini zokugezela)
Isuphamakethe, isitobhi sebhasi kanye nendawo yokudlela phambi kwekhondomu. Indawo yokubhaka eseduze.